Ukuze uthole efanele futhi zizale zokudoba kufanele zonke aqeqeshwe kahle. Ngamunye the Angler yesimanje ku arsenal kuyinto ikhoyili, okuyinto kusiza kakhulu ekuphileni kwakhe ukuhwebelana ophoqelelwe ngesikhathi ukudoba futhi iyingxenye ebalulekile imishini.
Ngokwemvelo, esikhathini ebusika idivayisi neze esetshenziswa, futhi kungakho imisiwe unomphela kuze sokudoba yamanzi evulekile. Phakathi isitoreji, emgqeni ukudoba ukuguga futhi ukulahlekelwa impahla yayo. Anglers abanokuhlangenwe nakho ngaphambi kwesizini ngayinye ukuyibuyekeza. Khona-ke, umbuzo uwukuthi indlela tie line ukudoba kuya spool. Lokhu kuzoxoxwa ngakho kulesi sihloko, kodwa kuqala ngeke ukuchaza kudivayisi kanye nezinhlobo coil.
izinhlobonhlobo lamakhoyili ohlobo
Uhlelo Kwehlukanisa ezimbili izinhlobo ohlobo: inertia futhi heater. Eyokuqala isetshenziswa ngokuyinhloko ngenxa bakudala iflothi yokumba futhi fly izinduku. Uhlobo ikhoyili yesibili yisona esikhulunywa abantu abaningi futhi asetshenziswa kabanzi. Wathola udumo lwakhe ngezithukuthuku ukwakhiwa, okuyinto livumela ukhonkolo eside futhi ngokushesha ukhethe umugqa spool yakhe.
Iinsetjenziswa ohlobo freewheeling
Izingxenye ezisemqoka izakhi ikhoyili:
Ezezindlu, lobeka amagiya, amabombo, izigcawu, izihlahla kanye neminye imininingwane ehlobene nawo.
A Rotor okuyinto ezithathekayo ingxenye, ngqo enamathiselwe nalokho lesoukladyvatelya indlela.
Spool - ilungu fixed, lapho supply elondolozwe line ukudoba.
Amvikele, ngokuvumela izinhlanzi wokukucima jerks enamandla, kanjalo ugweme line ukudoba kusuka breaking.
Yiphathe okuxhunyanwa ukunyakaza ukujikeleza ka ezandleni amalungiselelo ikhoyili.
Izindlela ze-emazombezombe line ukudoba ungene spool
Kukhona izindlela ezintathu eyinhloko izinkampani emgqeni ukudoba ungene spool yilezi:
Ngamunye kunezinzuzo zako kanye nebubi, ngakho ngokuvamile bajwayele ezimweni ngazinye.
Direct emazombezombe line ukudoba ungene spool
Uma induku silula, futhi ikhoyili omunye eshibhe ke amandla bobbin ingeqi 50-60 amamitha. Kusukela ubude line ukudoba ithengiswe ngokwesilinganiso elingamamitha 100, bese sigcwalisa it ngaphakathi njalo bobbin egcwele.
I ukugcwaliswa efanele bobbin kubhekwa lapho emaphethelweni usebe kuze kube semngceleni we line ukudoba nxeba 1-1.5 mm. Lokhu kukuvumela ukuba kwenyuswe ukhonkolo eside. Ukudoba umugqa kancane ukuphazamiseka kufanelekile is nilimaza phezu bobbin. Indlela ubophele line ukudoba kuya spool ngendlela?
Ekupheleni emgqeni kwenza iluphu nge double noma a engeyokuqala olulodwa. Ngaphezu kwalokho, kule loop bephushelwa iluphu evulekile umugqa esikhulu esiyinhloko, kanti lokhu kuhambisana ungene bobbin. It kuvela uhlobo ngocingo wokubhoboza-ubufakazi.
Ububi le ndlela wukuthi uma ivolumu spool obukhulu kunobukaJohane emgqeni ekhona ukudoba, nakanjani kwakhiwa ngesikhathi sokuphela ohlangothini spool. It bafaka ukhonkolo eside ngeke amandla. Futhi uma emgqeni uhlanganele ivolumu efanayo ukuthi we bobbin, uzokwenza le ndlela kuqhathaniswa eqolo. Kusukela imitha komugqa siyimali ezinhle kuwufanele futhi alisebenzisela izinzuzo cishe ngeke ube naso.
Han line ukudoba ungene spool ngokusekelwa
kusimo Lungisa indlela lokuqala lizoba ukulondoloza kuhla phansi spool. Ngenxa yalesi ungqimba isilonda noma ithephu yesikoshi. Lesi isilinganiso kwenza kube nokwenzeka ukuba kuncishiswe inani spool.
Ububi le ndlela itholakala lokuthi ukuthi ulayini ukudoba ukudiyazela ingcindezi deforms ungqimba eteyipini, futhi ekugcineni le ungqimba ingcina lingena singene umugqa oyinhloko futhi ngaleyo ndlela ithobela le Windings futhi kuvimbele unwinding.
Han line ukudoba ungene spool nge ukudiyazela
Indlela ubophele line ukudoba kuya spool ukunciphisa usebe ngaphandle nemiphumela ethile engathandeki? Isixazululo sale nkinga, eziyinkimbinkimbi esefikile kithi evela Melika. Esikhathini sokuqala, kuzwakala sengathi Esekelwa, futhi abadobi yethu, bemidlalo wambiza ukudiyazela.
Ingqikithi le ndlela ukuze uthole olahlekile ungqimba lesikafula eshibhile. Njengoba ungqimba olungaphansi impela komugqa ukudoba cishe esetshenziswa, futhi esikhundleni kuba kuqhathaniswa ezishibhile.
Indlela umoya line ukudoba kuya spool Buckingham? Lokhu kwenzeka ngezigaba eziningana. Okokuqala, i-main zokusebenza isilonda noma aluka monofilament ntambo. It is ke elihlobene ne-line ukudoba yenzelwe transoms. Lokufuduka komugqa olukhethiwe ukushuba isisekelo milimitha emaphethelweni spool.
Isinyathelo sesibili ukuze uthole inani hlehlisa kuya spool ukusebenza. Lokhu kukuvumela ukuba ushiye ungqimba isikebhe sizinze of line ukudoba ezansi, lapho cishe akazange asebenzise.
Imibuzo Evame Ukubuzwa Wabasaqalayo spinnings
Lapho izinkampani line ukudoba kwi spool Wabasaqalayo kukhona izinkinga eziningi. Ngowokuqala ngqa wabo - indlela tie line ukudoba kuya spool ngaphandle kosizo. Kusukela line ukudoba ulaliswe flat futhi ungqimba by ungqimba, kumele sikwenze ngesikhathi ukungezwani okuncane. Ngenxa yalesi ukulingana indwangu, okungase phusha iminwe Twine ngesikhathi emazombezombe.
Ngemva kokugwingciza, lo mbuzo olandelayo: "Indlela yokulungisa emgqeni lekhoyili ukuze ukuvimbela it kusuka unwinding ongahlosile?" Ukuze uxazulule le nkinga carabiner okwaziyo futhi enjoloba band. Carabiner eziboshelwe ngasekugcineni mahhala, futhi ngosizo bands nokunwebeka exhunywe unyawo esondweni.
Ukuluka ngensonto umugqa ukudoba kuya spool ukukhiywa futhi engingayenza ke?
Ezinye spool zinhlobo has a bomvu ifulege - a ngocingo. Ngoba ayikwazi ukulungiswa, uma uhlela ukulungisa line ukudoba ku ukunemba ubude ekusakazeni. Lona omunye amaphutha ezimbi kakhulu Anglers imfundamakhwela.
Indlela ukupheka ebhali ukudoba
Indlela ukupheka hominy ukudoba
Ferapontov sezindela kanye nemidwebo ye noDiyonisiyu